Ị nwere ike igosi m otu esi enweta ezigbo backlinks dị mma?
Tupu ihe ọ bụla ọzọ, gịnị na-eme ka azụlink dị mma? Na n'ozuzu, Google na-eji nyocha ihe njikọ weebụ gị ma ọ bụ blog na-eji ọtụtụ ihe ndị bụ isi, dịka njikwa njikọ, afọ ngalaba, nkwụpọ ederede, usoro njikọ njikọta, na ihe ndị ọzọ.Kedu ihe mere ị ga - eji mara otú e si enweta ezigbo backlinks ọma? Nanị n'ihi na ọ na-adịbeghị anya ịzụlite backlinks abụrụla otu n'ime akara ọkwa kachasị mkpa na SEO. Ọ bụ ya mere ị ga-eji mara ebe kwesịrị ekwesị na ihe ndị ziri ezi ị ga-ewere maka ịnweta akara azụ azụ ndị ahụ bara uru. M ga-egosikwa gị otu esi enweta azụmazụ azụ sitere na ịkparịta ụka n'Ịntanet, ịzụ ahịa isiokwu, mgbasa ozi mgbasa ozi, na akwụkwọ na-edekọrịta weebụsaịtị - ideal corn moisture harvest. Ya mere, ka anyị lelee ha niile n'okpuru.
N'ezie, usoro nke mgbasa ozi mgbasa ozi dị ugbu a kwesịrị iji njikọ. E nwekwara ihe dị ka iri na abụọ nke netwọk mmekọrịta na saịtị mgbasa ozi nke nwere ọtụtụ ndị ọkachamara na-arụ ọrụ, dị ka Google Plus, Twitter, Facebook, wdg.Ihe ọ bụ bụ na ihe ọ bụla ịntanetị na-ewu ewu na mgbasa ozi mgbasa ozi na-enwekarị ọkwa dị oke elu. Ọ bụ ya mere a na-atụ aro ohere a mara mma ka a nwaa gị maka nhazi njikọ dị mma na mbụ. Buru n'uche na maka nsonaazụ kachasị mma ebe a ịkwesịrị ịkwadebe usoro nhazi oge ọ bụla ma ọ bụ usoro mgbasa ozi. Ime otú ahụ, ọ bụghị nanị na ị ga-etowanye ndị na-ege gị ntị ugbu a, mana ị ga-echekwa ndị ahịa gị nwere ike iji ọdịnaya pụrụ iche ma dị iche iche na-enweta ezigbo uru, kwadoro ihe oyiyi dị mkpa, infographics, spreadsheets, wdg.
Usoro a nwere ike ịbụ n'etiti ụzọ kachasị mma isi nweta usoro nhazi njikọ njikọ. Nke a bụ otu esi enweta ezigbo nkwado azụmaahịa na ahịa ahịa - naanị nyochaa isiokwu ziri ezi ma kwadebe ọtụtụ isiokwu dị ukwuu. Ọzọ, malite na-arụ ọrụ na ọdịnaya gị iji debe ụfọdụ n'ime akwụkwọ ndekọ aha kachasị mma. N'ụzọ dị otú ahụ, echefula 'ịchekwa itinye njikọ na-atụghachi azụ na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ blog gị. Naanị jide n'aka na ihe niile dị - ọ ga - abụrịrị na ederede arịlịka, na mkpịsị nkwekọrịta mmekọrịta ka a ga - etinye n'ime ya.
Ebe nrụọrụ weebụ mgbasa ozi ndị dị otú a na-ekwusara ozi ọma bụ ebe dị mma iji jide ụfọdụ njikọ - nanị n'ihi na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile edepụtara na-emekarị obere saịtị iji gbasaa na Web. Nyere na ụlọ ọrụ mgbasa ozi ndị a na-achọ mgbe niile ihe ọhụụ ọhụrụ ma ọ bụ ụfọdụ akụkọ na-akpali akpali nke gbasara mmasị ọha mmadụ, ihe niile ị chọrọ bụ iji nye ha isiokwu ahụ dị mma nke na-ekpuchi isiokwu dị ọkụ nke dị na ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ niche. Naanị jide n'aka na ịmepụta aha aha na ọdịnaya dị mkpa nke ga-adọta ndị na - ege ntị na - eleba anya - na ịmeela.
Akwụkwọ Ịkekọrịta weebụsaịtị
Nke ahụ ga-abụ ụzọ ọzọ dị mma nke njikọ njikọ anụ ahụ, ma na-enyekarị na azụlinks na àgwà DoFollow. Ọzọkwa, isi ihe ma ọ bụ ndị yiri ya na-atụkwasị obi nke ọma site na engines ọchụchọ dị ka Google n'onwe ya. Ya mere, ohere a yiri onye kwesịrị ekwesị, ọ dị mma? Nke a bụ otu esi enweta akwụkwọ nkwado dị mma site na akwụkwọ ntanetị ịdekọrịta - naanị nwere oke mma ọdịnaya (i. e. , ọ bụghị isiokwu dị oke egwu, ma ọ bụ posts dị ogologo). Ozugbo a kwadebere ihe niile, naanị ị ga-edo onwe ya n'okpuru ya site n'itinye ihe na backlink na-atụga ụzọ na weebụsaịtị ma ọ bụ blog gị.